Dib-u-habeyn lagu sameeyay EGO Line Line 474 sida Express Line | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDib-u-habeynta khadka tooska ah ee loo yaqaan 'EGO Line Line 474' sida khadka loo yaqaan 'Express Line'
11 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
khadka dib-u-habeynta lacagta sida khadka tooska ah
Dib-u-habeynta khadka tooska ah ee loo yaqaan 'EGO Line Line 474' oo ah Express Line; Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, oo hirgalisay dhaq dhaqaaqyo cusub oo ku saabsan sidii ay u noqon lahayd magaalo ardayda la-saaxiibka ah, waxay bilaabeen inay u qaybiyaan maraq kulul ardayda jaamacadaha iyadoo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Dowlada hoose ee magaalada, oo taageero dhaqaale siisa ardayda wax barata ee caasimada laga bilaabo dhimista biyaha ilaa gaadiid, wadooyinka baaskiilka iyo kaarka dhimista, ayaa bilaabay qeybinta maraqa ugu horeeya ee jaamacadaha laga dhigo jaamacada Yıldırım Beyazıt.
FARSAMADA Ugu quruxda badan: HOT SOUP
Ardayda jaamacadda ee aan quraacda ku haysanin Ankara waxay maalinta ka bilaaban doonaan maraqa kulul ee Magaalo Weyn.
Ardaydu waxay si weyn u muujiyeen digaagga kulul iyo rootiga loogu adeegsaday jikada EGO oo ay u qaybiyeen Waaxda Adeegyada Bulshada ee Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara.
KHUDBADAHA SOUP wuxuu bilaabi doonaa 7 CAMPUS UNTIL CHRISTMAS
Necip Özkan, Madaxa Waaxda Adeegyada Bulshada ee Ankara ee Magaalo Weynta Magaalada Ankara, ayaa sheegay in qaybinta maraq bilaashka ah laga sameyn doono Hacettepe, Gazi iyo xarumaha farsamada ee Jaamacada Bariga Dhexe. . Waxaan qaadaneynaa barta qaybinta maraq ee aan ka bilownay Jaamacadda Yıldırım Beyazıt una sii gudubnay xarrunta 7 ee ku taal Ankara ilaa bilowgii sanadka. ”
Ardayda sheegay inaysan quraacda karin karin maxaa yeelay waxay guriga ka soo noqdeen saacadihii hore, waxayna uga mahadceliyeen Madaxweynaha Yavaş adeeggan.
Zeynep Gül, oo ah arday ka tirsan waaxda turjumaada iyo turjubaanka ee jaamacada Yildirim Beyazit, ayaa yiri, çek dhibaato badan ayaan ku jirnaa inaan subaxnimada imaano Esenboga. Quraac ma kari karno maxaa yeelay goor hore ayaanu soo kacnay. Waad ku mahadsan tahay fikirka noocan ah. Waxay sidoo kale runtii aad u adkeyd in la sameeyo safarka taagan ee 1,5 saac ee subaxdii. Sidoo kale waad ku mahadsantahay khadka toosan ee loo yaqaan '474'. Jadwalka baskeena waa la kordhiyay. Waxyaabaha wanaagsan ayaa dhacaya. Waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo Madaxweyne Mansur Madaxweynaha adeegyada noo fidiyey ”.
Çağrı Tali wuxuu yiri wuxuu ka yimid meel ka baxsan gobolka si uu wax ugu barto Ankara wuxuuna yiri, uk Waligeen ma fileynin dalab noocaas ah. Waxay ahayd layaab nagu noqotay annaga. Subaxdii maan qaadan karin quraac si aan ula sii socdo dugsiga. Mansur wuxuu jeclaan lahaa inuu u mahadceliyo Madaxweynaha fikirka ardayda anaga.
KHUDBAD (DIRECT) LINE WAA IN ADEEGA
Ka dib baahida weyn ee ardayda, khadka basku wuxuu soosaaray 474 u adeegaya ”Yıldırım Beyazıt University (AYBÜ) -Saray-Ulus-Kızılay yeniden ayaa dib loo habeeyay amarkii Duqa Yavaş wuxuuna bilaabay inuu u shaqeeyo sidii khad furan.
Kadib qorsheynta cusub ee ay sameysay Agaasinka Guud ee EGO, ardayda waxay awoodi doonaan inay si fudud u safraan iyagoo kordhinaya tirada adeegyada khadka toosan ee AYBU-Saray-Ulus-Kızılay.
Wasiirka Arslan: "15 oo loogu talagalay Mashaariicda Gaadiidka 474 sanadkii"
Wasiir Arslan: "Bilyan 474 Bilyan Oo Loogu talagalay Mashaariicda Gaadiidka"
TCDD ee 2 Khadka Cusub ee Turki Express
EGO waxay ku dhawaaqday Khadka cusub ee Sinjans
31 YBO Agaasinka, Qalabka Ilaalinta Shaqsiyeed iyo Shaqada…
Motaş wuxuu ku yaal kaydinta Tehlikeli ee Kaydka Halista ah konulu
Trabzon Metropolitan, 1400 bas bilaash ah inta lagu jiro fasaxa…
Jaamacadda Beykoz iyo Nidaamka Tareenka TCDD…
Sarkaalka Gaadiidka-Sen, Adeegyada Gaadiidka Kol
Eskişehir 'baaskiil Kaalay Turkey!' Aqoon-isweydaarsi abaabulan
Dhismaha Saldhigga Eskişehir dib ayaa loo dhisay iyada oo la raacayo qaabkeedii asalka ahaa…
SAMULAŞ "New Express Line 15" oo la furay December
Khadka baska 474